Wormwood - bozaka mangidy - dia fantatra amin'ny alahelony: ny rehetra dia mahatsiaro ny fomba nanesorana ny ravin'ity zavamaniry ity nandritra ny fahazazany, ka voatery nanasa tanana avy hatrany. Saingy ny alahelony, izay mirakitra kankana - ny hazo an'Andriamanitra, dia manana fanananao ary mahasoa indrindra.
Ankoatra ny lolom-po mahatsikaiky rehetra, izay, eny an-dalana, dia hita ao anaty isan-karazany samihafa amin'ny karazana zavamaniry samihafa, karazan'antoka amina sehatra tena manan-danja, be dia be ny ianiana iankinan'ny vitaminina B , A, ary C.
Ny akora simika ao amin'ilay orinasa dia ahitana ny taninina, izay misy vokany mahavariana, ary koa ny potassium, izay misy vokatra mahasoa eo amin'ny asan'ny fo.
Ny toetra mahasoa ny zavamaniry
Mahaliana fa ny karazana voankazo mahavariana dia ampiasain'ny fanafody ara-batana sy ara-panjakana.
Fanasitranana alika - Ny hazo no ampiasaina amin'ny fitsaboana ny homamiadana, noho izany, manomana fiotazana sy mandray ny fanolorana.
Ny batisan'ny kankana no ampiasaina amin'ny fitsaboana ny neuroses, ary koa izy ireo dia aseho amin'ny gout sy ny areti-maso.
Ny vato voa dia voaroaka miaraka amin'ny fanampian'ny fiomanana izay mampiasa menaka solifara; Manampy amin'ny famolahana vato ao anaty fasika izy, dia tena antispasmodic mahafinaritra, diberika sy mangatsiaka be.
Wormwood - Nahitana ny fampiharana azy amin'ny hazo fihinam-bary ny hazo. Mandrindra an-tsehatra ny helminths amin'ny vatany izy, ary manome vokatra tononkira sy mamerina.
Fantatra fa misy fiantraikany tsara eo amin'ny toetran'ny vatana amin'ny aretina ao amin'ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinal sy ny aretina isan-karazany.
Ny tranomaizina koa dia ampiasaina amin'ny fampiasana ivelany: ny ravinkazo vokatry ny kankana dia ampiasaina amin'ny endriky ny fanoratana amin'ny fitsaboana ny furuncles sy ny fambolena hafa.
Ny hazo avy amin'Andriamanitra - ny hazo mahafaty dia manana fanandramana fanafody sy loto mifandraika amin'ny fampiasana azy. Tsy tokony hampiasaina amin'ny famolavolana ny fambolena mandritra ny fitondrana vohoka sy ny famitahana. Ankoatra izany, dia voafetra ny fampiasana azy amin'ny anemia . Raha tsy misy dokotera manoloana ny dokotera dia aza mampiasa zava-mahadomelina, satria ny rà mandriaka dia mety hiteraka korontana sy fanandramana.
Inona no manampy ny ashberry chokeberry?
Berisin'ny Schisandra - kitapo voalohany ho an'ny trano iray ao anaty orinasa iray
Ozokerite - fampiasana trano
Marjoram - fananana medikaly
Voankazo mena: Properties favorable
Krovohlebka medikaly - ampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Tibetana lofant - toetra mahasoa sy fanoherana
Monarda - fanasitranana
Ny fitsaboana amin'ny gilatina
Thymus - toetra amam-panahy sy ny fanoherana
Colors amin'ny fanala nao 2013
Chrissie Taygen sy John Legend no nitifitra ny family raha vao nanambara ilay modely fanabeazana faharoa
Ahoana no hambolena voatabia?
Tomatomena voahitsakitsaka - Recipes
Ahoana no hamantarana ny virjiny?
Ny areti-nify dia mifindra na tsia?
Ahoana no hankalaza ny fitsingerenan'ny fampakaram-bady miaraka amin'ny vadiny?
Fizotry ny vanim-potoanan'ny ratra
Tsy maniry ny hiasa ny lehilahy - toro-hevitra amin'ny psikology
Soavaly amam-borona - toetra amam-panahy sy ny fanoherana
Fiovan'ny tabilao fanenitra
Fanasan-damba mena - manao sary miloko miaraka amin'ny booty mavo izahay
Mofomamy ho an'ny pancakes
Mpanjifa - mahasoa